Oromia region president Lemma Megersa and Amhara region president Gedu Andargachew conference
Waggaa 15 dura Goota Umurii isaa guutuu Qabsootti jiruutu, dabballoota leenjisuuf akkas jedhee dhaame. “Qabsoo nuuti gaggeessinu galma akka ga’uuf, Oromoo addunyaa irra jiru hundaa Qabsoo keessatti akka hirmaatuuf qopheessuun, hojii keenya jalqabaati. Kunis Baayyina Oromoo humnatti jijjiiruuf gargaara. Kana gochuun keenya waa lamaaf jedhan. Inni tokko—humni Oromoo dura dhaabbatu deebi’ee akka hin kaaneef gargaara. Inni lammadaa—yoo nuutillee wareegamnee, dhalooti itti aanu qabsoo inuma itti fufa jedhanii, Oromoo humneessuu kana fakkeenya biraatiin isinitti hima jedhan. Bishaan baarmeela guutuu danfisuu yoo barbaaddan, jalqaba baarmeela duwwaa abiddarra keessanii bishaan itti guutuu dandeessan. Rakkoo hin qabu. Rakkoon jiru isa kanaa miti. Bishaan baarmeela guutuu kana ega danfisnee booda akkamittin irraa buufana ? ykn bishaanichatti dhimma baanaadhaa ? Irraa baasuuf rakkoodhaa. Keessaa waraabanii dhimma itti ba’uuf rakkoodhaa. Deebisanii qabbaneessinaan deebisanii danfisuu barbaachisa. Kanaaf qabsoon Oromoo sadarkaa isa bishaan danfeerra geesifnee diina keenya filmaata dhabsiisuudhaa” jedhan. Yeroo sanatti dubbiin kun kanneen qoosaa itti fakkaatee hedduudha. Garuu qoosaa hin turre. Waanuma har’aa Biyya keessatti argaa jirruudhaa. Baayyina Oromoo humnatti jijjiiruun raawwateera. Bu’aa humnatti jijjiiramuu ijumaan argaa jirra. Humni kun guyyuu barachaa fi muuxachaa diinaaf yaaddoo qofaa osoo hin taanee, laafachuu sirnichaaf iyyu sababaa ta’eera.
Waaqayyoo Addunyaa kana irratti waan waliif faallaa ta’an waliin, umama hundaa uumee. Gurraachi akkuma jiru adiin jira. Gabaabaan akkuma jiru dheeraan jira, Kkf . Akkasuma siyaasini wayyaanee ol ba’ee gadi deebi’aa jira. Siyaasni Oromoos gadirraa ol ba’aa jira. Waan kana lameen humni dhaabuu gonkumaa hin jiru. Oromoon abbaa dhimmaa mataa isaa waan dhaabuu danda’uu miti. Kun seeruma umamaati . inumaa hammeenyi kana waliin raawwatamu jiraannaan , waan umamaa kana yoo ariifachiisee malee dhaabuu hin danda’uu.Siyaasi Biyya Itoophiyaa keessaa kana fakkaata. Oromoon wareegama baasuun ala sodaa tokkollee hin qabu. Waan uumaan nu kennee deeffachuuf ammo wareegama baasuun gootummaadhaa. Warri dharaa fi kijibaaf of ajjeesan itti haa gaabban. akka nama qabsoo eegaluutti waan walitti himnu hin qabnu. Bakka jirru irratti, wal gorfachuutu furmaataa jechaa qabxiilee adda addaa irratti dubbii waliif dhaamnaa.
Adeemsi kun bu’aa eenyuu irratti hundaa’ee akka gaggeeffamee anaaf gaaffiidhaa. Namoonni hedduun gama wayyaaneen sabootaan walitti nu naquu herreeganii akka waan gaaritti fudhatanii ta’aa. Anaaf garuu waan kun furmaata jedhee hin yaadu. Saboonni kun qaamoota isaan bakka hin buufanneen furmaata waaraa argachuu hin danda’an. Humni gabrummaa keessa taa’ee , gabroonfataa jalatti rakkoo furatuu eessaa dhufe ? kanarratti yeroo biraa dubbanna. Ani akkan hubadheetti adeemsi konfiransii kanaa kan amaaraaf osoo hin taanee, humnumaanuu somaalee waliinis yoo gaggeeffamee, galiin isaa kanaa mitin jedha. Wayyaanootatu tapha kana taphachaa jira. Wayyaanoonni keessi isaanii ciccirameera. Humnaa fi adeemsa Oromoo kana fagoottti sodaachaa jiru. Kanaaf dhuma irratti dubbiin jabaachaa deemnaan, Oromoo waliin akkamiin akka nagaa buusan yaalaa jiru. Humni biraa dhufee ykn ABOn dhufee araara dubbachuu irra, karaa ergamtootaa fi Abbootii Gadaa waan raawwachuu barbaadaniif karaa cirachaa jiru. Araara buufnee jedhanii umurii dheerachuu barbaadu. Yoo ta’uu baate ammo, Qabeenyaa isaaniif sadaa guddaarra jiru. Kana hanbifachuuf abshaalummaan itti jiran isa kana jedheen shakka. Seenaama warra Ingilizii, Afriikaa Kibbaa keessatti ta’ee jechuu kiyya. Wayyaaneen isa dhugaa dubbachuuf dubbiin Oromoon itti jiru lolaan akka xumuramu hin barbaaddu. Tigiraayiin Foxxoqisullee yoo barbaadan. Maaliif jennaan siyaasa isaanii fixanii atu jiranii, Ummati akkasi isaan jibbuurra osoo jiru, humnaan kufuutti murannaan gonkumaa hegareen Tigiree ni dhumataaf. Kana bareechanii beekuuf shira kana eegalan. Kanaaf wanni nurraa eegamuu waa hundaa seeratti hirkifachuu fi adeemsa kana OPDOf hayyamurra, dhaabbadhuu jechuunii qabnan jedha. Abbootii gadaas dhaabuu qabnaa. Sochiin isaanii dantaa Oromoo irratti hundaa’uu qaba. yaadoota hedduu ammaaf hin kaafnee.haa bulu.